Dingana arahina amin’ny famonoam-balala – IFVM
Inona no atao raha hamono valala? Inona avy ireo dingana tokony arahina?
Misy sehatr’asa telo lehibe sady mifampiankina ny famonoana valala:
-Sehatr’asa fanairana sy fitiliana
Fanairana sy fitiliana:
Misy tranga maromaro no ahafantarana fisian’ny valala, alohan’ny anaovana ny fitiliana: dia ny fandrefesana ny rotsak’orana, ny famantarana ny toe-tany sy ny zava-maniry, ny fiovan-toetra ny valala. Ka rehefa voamarina sy mahafeno ireo tranga ireo dia atao ny fitiliana fa ahiana ny fisian’ny valala.
Ny fandarofana no ivon’ny asa famonoambalala. Rehefa voamarina ny fisian’ny valala dia afaka miditra amin’ny fandarofana: raha Latsaky ny 10ha ny faritra rakotra valala: ireo vondron’olona any amin’ny fokontany (VOI-MV), fa raha 10ha ka hatramin’ny 100ha: ny tompon’andraikitra « Chef de poste » ao amin’ny IFVM no mamono azy; raha 100ha ka hatramin’ny 1000ha kosa: ny tompon’andraikitra « Chef de zone » no mamono azy. Ary raha 1000ha ka hatramin’ny 10000ha: ny « Chef de service intervention » no mamono azy. Saingy raha toa ka mihoatra ny 10000ha: famonoana amin’ny alalan’ny fiara manidina.
Tsy tontosa ireo sehatr’asa roa etsy ambony raha tsy misy ny fitaovana. Ny sehatr’asa fampitaovana no mamatsy ny fitaovana rehetra mifanandrify amin’izay ilaina. Toy ny fanafody, fitaovana fandarofana, ny fiara, ny fitaovana fiarovana.
Best Free Hookup Sites For the purpose of Singles [2020 Edition]
Tension and Stress: How Long Does it Get to get CBD Crude oil to Do the job
Archives Sélectionner un mois mars 2020 août 2019 février 2019 janvier 2019 novembre 2018 octobre 2018 septembre 2018 juillet 2018 juin 2018 mai 2018 avril 2018 mars 2018
Direction Administratif et Financière
Direction du Système d"Information et de la Communication
MAEP – Ministère de l »Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche.
PRIASO – Projet de Réhabilitation des Infrastructures.
Copyright DSIC/SIT 2020